Home » Creative Writing » အလွဲတစ်​ခု​တော့ ပြီးခဲ့ပြန်​ပြီ
အလွဲအမှားတို့ ​ပေါင်းစည်းပြီး ရလာဒ်​က မြန်​မာလူမျိုးလို့​တောင်​​ပြောလိုက်​ချင်​​သေးရဲ့ ။ ကိုယ်​ပိုင်​ဆိုလို့ မာမာထန်​ထန်​ လက်​ညိုးထိုးပြစရာ တစ်​ခုမှမရှိပါဘဲ အငှားပစ္စည်းများနဲ့ အကြွားထူတာလဲ မြန်​မာ​တွေပါပဲ ။ အလွဲ​တွေထဲမှာ အလွဲအကြီးဆုံးက​တော့ သင်္ကြန်​ ဆိုတာပါပဲ ။ နှစ်​​ပေါင်းတစ်​​သောင်း​လောက်​ရှိတဲ့ ဗြဟ္မဏ ပြက္ခဒိန်​ကို သက္ကရာဇ်​​တွေဖြို ခပ်​တည်​တည်​ယူသုံး ။ ပြက္ခဒိန်​နဲ့ အတူပါလာတဲ့ ဗြဟ္မဏ အယူအဆနဲ့ နှစ်​သစ်​ကူး ပွဲ​တော်​ကို မြန်​မာမှုပြုပြီး ကိုယ်​ပိုင်​ ယဉ်​​ကျေးမှု လုပ်​ခဲ့တာ နှစ်​​ပေါင်း တစ်​​ထောင်​​ကျော်​ခဲ့ပါပြီ ။ ပ​ဒေသရာဇ်​ ​ခေတ်​​ အဆက်​ဆက်​မှာ သင်္ကြန်​ဟာ မင်းပွဲစိုးပွဲသက်​သက်​ပဲလား ။ ပြည်​သူ​တွေနဲ့​ကောသက်​ဆိုင်​ရဲ့လားမသိ ။ ကုန်း​ဘောင်​​ခေတ်​မှာသာ စာဆိုတို့ သင်္ကြန်​ကိုဖွဲ့တာဖတ်​ဖူးရ ။ ကျန်​တဲ့​ခေတ်​​တွေမှာ​တော့ သင်္ကြန်​မှာ ပြည်​သူတို့ ပါဝင်​ဆင်​နွဲပုံကို ရာဇ၀င်​မှာရှာမရ ။ ခိုင်​လုံတဲ့ အ​ထောက်​အထားမ​တွေ့ ။ ​မှေးမှိန်​လှ​ချေ၏ ။ ရာဇ၀င်​ သင်္ကြန်​ဇတ်​လမ်း ​ပြောပြပါဆိုလျှင်​​တောင်​ နရသီဟပ​တေ့မင်းနဲ့ ​စောလုံမိဖုရားတို့ဇာတ်​လမ်းကလွဲပြီး ​ပြောပြစရာမရှိ​အောင်​ ဆင်းရဲ​လေ​တော့ ။ ပ​ဒေသရာဇ်​ မင်းအဆက်​ဆက်​က​ကော သင်္ကြန်​ ဆိုတဲ့နှစ်​သစ်​ကူးပွဲ ဆင်​ယင်​ခဲ့​လေသလား ။ မ​သေချာပြန်​။
ကိုလိုနီ ​ခေတ်​မှာ အဓိပ္ပာယ်​တစ်​မျိုးနဲ့ သင်္ကြန်​ကိုအသက်​သွင်းခဲ့တာက​တော့ ဖတ်​ဖူးတဲ့ စာ​ပေ​တွေမှာအထင်​အရှား ။ ဘယ်​လိုအဓိပ္ပာယ်​နဲ့ ဆင်​ယင်​တာလဲ ။ ရှင်းရှင်း​လေးပါပဲ ။ အင်္ဂလိပ်​လက်​​အောက်​ ငြိမ်​၀ပ်​ပိပြား​အောင်​ အအုပ်​အချုပ်​ခံ​နေရချိန်​မှာ နှစ်​သစ်​ကူးပွဲ လုပ်​လိုက်​​တော့ ။ လူမျိုးတစ်​ခုရဲ့ ရိုးရာဓ​လေ့ မတားသာဘူး ။ ဒီအချိန်​မှာ လူထုကို စည်းရုံးဖို့ အခွင့်​အ​ရေးရတာ​ပေါ့​လေ ။ သင်္ကြန်​ သံချပ်​တို့ သင်္ကြန်​သီချင်းတို့က​နေ ၀ံသာနုစိတ်​ဓာတ်​ ပြန်​လည်​​ဖော်​ထုတ်​ဖို့ သင်္ကြန်​ကို လက်​နက်​တစ်​ခုအဖြစ်​အသုံးချလာခဲ့ကြတယ်​ ။ လွတ်​လပ်​​ရေး ဒီဘက်​​ခေတ်​မှာ​တော့ သင်္ကြန်​က အစဉ်​အလာ ကြီးမား​နေပြီ ။ ကိုယ်​ပိုင်​မဟုတ်​ဘူးဆိုလည်း လုပ်​မှာပဲ ။ သင်္ကြန်​အစဉ်​အလာတစ်​ချို့ မြန်​မာမှုလည်းပြုပြီးသားဆို​တော့ ။ ကိုယ့်​လက်​ထဲ​ရောက်​​နေတာ ကိုယ့်​ဟာလို့ပဲ သ​ဘောပိုက်​လိုက်​ကြသလား​တော့မသိ ။ နားလည်​သူတို့ကလည်း အများနဲ့တစ်​​ယောက်​ တုံဏိဘာ​ဝေ ​နေ​ပေး​လေကြ​လေ​တော့ ။ ခုလက်​ရှိအချိန်​မှာ ” မြန်​မာ့ရိုးရာ မဟာသကြန်​ ” ဆိုတဲ့အထိ ဆိုင်းဘုတ်​တင်​ရဲလာပြီ ။
တစ်​ရက်​က သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​နဲ့ စကားစပ်​မိ​တော့
” ဟ ငါတို့မြန်​မာပြည်​မှာတင်​မဟုတ်​ဘူး။ ဗုဒ္ဓ မ​ပေါ်ခင်​ နှစ်​​ပေါင်းနှစ်​​ထောင်​​လောက်​ကတည်းက အင်​ဒိုချိုင်းနား ကျွန်းဆွယ်​ တစ်​ခုလုံးမှာ ဗြဟ္မဏ ဝါဒ ထွန်းကားခဲ့တာ ။ အဲ့ဒိ​တော့ သင်္ကြန်​ဆိုတဲ့ နှစ်​သစ်​ကူးပွဲက နိုင်​ငံ​တော်​​တော်​များများမှာရှိခဲ့တာ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ဗြဟ္မဏ က​ရှေ့က ​နောက်​မှ ဗုဒ္ဓ ဝါဒ ၀င်​လာတာ ။ အိမ်​ရှင်​အ​ဟောင်းရဲ့ အ​တွေးအ​ခေါ် အယူအဆ ​တွေကအ​ခြေခံ အဖြစ်​ကျန်​​နေခဲ့မှာပဲ ။ အဲ့ဒါ​တွေ လိုက်​ပြင်​​နေလို့​တော့ရမှာမဟုတ်​ဘူး ”
“အဲ့ဒိ​တော့ လမ်းလွဲကြီးအတိုင်း ဆက်​​လျှောက်​​နေရမှာ​ပေါ့ ”
“မင်းဖာသာ မ​လျှောက်​ချင်​​နေခဲ့​ပေါ့ ။ သီချင်းစဆိုကတည်းက နရီက လွဲလာခဲ့တာ သီချင်းအလယ်​ကျမှ ပြင်​လို့ရမလားဟ ။ ပြီး​တော့ ဆို​နေတဲ့ သီချင်းက အများနဲ့ဆို​နေတဲ့ သံပြိုင်​သီချင်း ။ လွဲ​နေမှန်းသိရင်​ မင်းလိုက်​မဆိုနဲ့ လွဲ​နေမှန်းမသိတဲ့​ကောင်​​တွေ ဆက်​ဆိုပ​လေ့​စေ​ပေါ့
စစ်​ကူ​တောင်းလိုက်​ကာမှ အရှုံး​ပေါ်​တော့တာပါပဲ ။ ​နေ၀န်းနီ ဒီသီချင်း မဆိုဖြစ်​တာ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​​ကျော်​​ရော​ပေါ့ ။ လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​ သုံးဆယ်​တစ်​၀ိုက်​က မြန်​မာ​တွေ နှစ်​ကူးတာက ညင်​သာတာက တစ်​​ကြောင်း ​နေ၀န်းနီကလည်း ​ထေရဝါဒ ပီပီပြင်​ပြင်​မဖြစ်​​သေးတာကတစ်​​ကြောင်းဆို​တော့ ။​ရေစီး​ကြောင်းအလွဲထဲ အသက်​အစိတ်​​လောက်​ ​မျောခဲ့ဖူးပါရဲ့ ။ ဒီဘက်​နှစ်​ပိုင်းမှာ​တော့ တစ်​နှစ်​ပြီးတစ်​နှစ်​ ” အင်း အလွဲတစ်​ခါ ပြီးပြန်​​ပေါ့ ” လို့​ရေရွတ်​ရင်းနဲ့ ………….
ဒီနှစ် က ၁၃၇၇ တဲ့ အဘနီ ရဲ့။
အနော်တို့ ဆက်ထိန်းပါတယ် အရီး…
မြန်မာပွဲတော်တွေက မြန်မာပြက္ခဒိန်ရက်နဲ့ သတ်မှတ်ထားလေတော့… တိုးရစ်တွေကို ပွဲတော်ရက်တွေ အကြာင်းကြားဖို့ဆို နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန်နဲ့ တစ်နှစ်ကြိုကြည့်ရတာ… ခုတောင် ၂၀၁၆ မတ်လထဲမှာ လာမယ့် ဧည့်သည်တွေအတွက် ပွဲတော်ရက်တွေနဲ့တိုက်ပြီး ခရီးစဉ် ဆွဲပြီးပြီ…
သင်္ကြန်မှာ.. နိုင်ငံခြားသားတွေ.. တိုးရစ်တွေဆီက.. ငွေရအောင်လုပ်တတ်ရင်… ဒါကို.. ဒီဝင်ငွေတွေကို.. ဘိုးဘွားအမွေလို့သတ်မှတ်ရမှာပေါ့…
ဘေးမှာ.. ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံး ၂နိုင်ငံရှိနေတာပဲနော…။ သုံးတတ်ရင်.. ဆေး…။ ဆေး..။
ဟဲဟဲ သူဂျီးသာ အဖနိုင်​ငံ​တော်​ထဲမှာဆိုရင်​​တော့ အရင်​ဆုံးထိပ်​တိုက်​​တွေ့ရမှာက “မဘသ “ပဲ ။ သူဂျီးလိုလူမျိုး ၈၀% ​လောက်​ ဒီထဲမှာရှိ​နေရင်​လည်း အဲ့အဖွဲ့ ဒီ​လောက်​​နေရာယူနိုင်​မှာမဟုတ်​ ။
အဲ..အဲ.. ဟိုဗလီဆရာနဲ့.. ဗာတီကန်က.. ရဟန်းမင်းတန်းခန့်ထားတဲ့..ခရစ်ယန်ဘုန်းဘုန်းပါ..မကျန်..။
ဟမ်မလေးးးးး တဂျီးယယ် သိုင်းပျည်ဝင်ငွေတိုးဖို့ စဉ်းစားထားတာ ကောင်းလှချည်လားးးး
သင်္ကြန်ကို မကြိုက်တာက ခရစ်ပြက္ခဒိန်ကြီးနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာကိုပဲ… ဘယ်လိုမှ ခံစားကြည့်လို့မရဘူး….
လာလာ​ပြောတဲ့သူ​တွေများ​နေလို့ ပြက္ခဒိန်​ပို့စ်​​ရေးပြီး မတင်​လိုက်​ရ​သေးခင်​ ဖုန်းရီစတပ်​ချတဲ့ထဲပါသွားလို့ ပြန်​​ရေး​ပေးမယ်​ ။
တနှစ်ပြီး တနှစ်တော့ လွဲလွဲလေးနဲ့ပဲ သွားမှာပါပဲအဘနီ။